Barta Ugu Kulul Jirka Aadanaha oo La Helay – Goobjoog News
Cilmibaarayaal ka tirsan jaamacadda Paris ayaa helay xubinta ugu heerkulka badan jirka aadanaha uu kulkeedu gaarayo 500C, waa mitochondria oo ah halka ay tamarta ka heleen dhammaan unugyada nool ee jirka aadanaha.
Illaa iyo wakhti dhow waxaa loo haystay in kuleyl heerkaa le’eg aaney suurtogal ahayn in jirka aadanaha gudihiisa laga helo. Dhammaan naasooleyda waxay isku heerkul ka yihiin beerka, maskaxda iyo xubnaha kala duwan ee gudaha jirka, marka laga reebo iniinta xiniyaha ragga oo iyadana heerkulkeedu aanuu dhaafsiisnayn 340C.
Cilmibaarayaashan ayaa qiyaasay heerkulka xubnaha kala duwan ee jirka, iyadoo daraasaddan ay suurtogal ka dhigay milanka Fluorescence oo shucaaca uu bixinayaa ay kala duwan tahay heelkul kasta, noocan cusub ee halbeegga heerkulka ayaa lagu ogaaday in mitokondria heerkulkiisu gaarayo 500C.
Saynisyahandan ayaa aaminsan in daraasaddan si heersare ah isaha loogu hayo, maadaama ay suurtogal ka dhigi karto iney wadada u furto fahamka habka aadanaha uu kansarku ku qaado iyo in la ogaado waxa ay ku tiirsan yahay gabowga degdegga ah ee aadanaha qaar ku yimaadda.
Qaramada Midoobay oo Ka Digtay Musuqmaasuq Ka Dhaca Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya
Cialis In Der Apotheke [url=http://cialibuy.com]cheap cialis online[/url] Viagra Cost Per Tablet Cialis Order Fluoxetine 40mg Prozac With Next Day Delivery
Discount Progesterone Worldwide On Line Free Consultation Next Day Delivery Chicago [url=http://cialibuy.com]cialis without prescription[/url] Reputable Suppliers Of Generic Viagra Cialis Allergic To Amoxicillin Hereditary
Ejhtvx coxxby Buy cialis discount cialis daily cost
Bayavc vtemoy Brand viagra over the net cialis canada
Rqhssu uifgxj Sale viagra where to buy cialis online
Gwymbd wymxeq canada pharmacy canada pharmacy
Saraakiil Ka Tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Oo Siminaar Loogu Soo Xiray Muqdisho